रित्तो संसद्, हाजिर गर्ने २२२, छलफलमा बस्ने सांसद ५५ – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
रित्तो संसद्, हाजिर गर्ने २२२, छलफलमा बस्ने सांसद ५५
प्रकाशित: २०७५ जेठ ११ गते २०:५६
काठमान्डौं – नीति तथा कार्यक्रम संसद्को नियमित छलफलको विषय होइन, वर्षभरिका विकास निर्माणलाई दिशानिर्देश गर्ने विशिष्ट प्रक्रिया हो । तर, राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा सोमबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबारबाट सुरु भएको बहसमा बिहीबार सांसदको उपस्थिति कमजोर थियो । छलफलमा सांसदको सहभागिता त झन् लगभग शून्य भयो । संसद्मा हाजिर गरेर भत्ता सुनिश्चित गर्ने सांसद २२२ थिए, तर बैठकमा उपस्थित सांसद ५५ मात्र थिए । उपस्थितमध्ये पनि आफ्नो मन्तव्य दिएपछि हिँडे । उनीहरू संसद्को बहसमा होइन, क्यान्टिनको गफमा व्यस्त थिए । संसद् प्रतिपक्षको मञ्च हो, तर प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बोल्न नाम लेखाएर पनि बोल्न चाहेनन् । सभामुखले तीनपटक नाम लिँदा पनि उनी भेटिएनन् ।
हाजिर गर्ने सांसद -२२२
छलफलमा बस्ने सांसद- ५५
कुन दलका कति उपस्थित ?
सत्तापक्ष – ३९
– अन्य – ४
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा २२२ सांसदको उपस्थिति रहेको बताए । गणपूरक संख्याबारे प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘कुनै विषयमा निर्णय गर्दा एकचौथाइ गणपूरक संख्या पुग्नुपर्छ ।’
किन बसेनन् सांसद ?
तत्कालीन एमालेकी सचेतक एवं नेकपा नेतृ शान्ता चौधरीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरू रुचिपूर्ण नै सहभागी भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संसद्मा न्यून उपस्थिति त होइन । लामो छलफलमा मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ । कोही चिया खान निस्किनुहुन्छ । जिल्लाबाट जनप्रतिनिधिको टोली डेलिगेसन आएको हुन्छ । उता पनि भेट्नै पर्छ । यो अपजसे पद हो । हामीले सांसदलाई बोलिसकेपछि नजानुस् है भनेका छौँ । अरूको पनि धारणा सुनाैँ भनेका हुन्छौँ ।’
लाखे देख्दा तर्सिएझैँ भए निजी क्षेत्र : डा. भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालबाट प्रतिनिधिसभा सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले झन्डै दुईतिहाइ जनप्रतिनिधिसहितको नेकपा सरकारसँग निजी क्षेत्र लाखे देख्दा तर्सिएजस्तो भएको बताए । आफू बाल्यकालमा काठमाडौं आएर पहिलोचोटि लाखे जात्रा देख्दा तर्सिएको प्रसंग निकाल्दै डा. भट्टराईले कम्युनिस्टको सरकार आउँदा वैदेशिक लगानी नआउने र आफ्नो भूमिका घट्ने आशंकामा निजी क्षेत्र तर्सिएको बताए ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक नै रहेको उनले बताए । डा. भट्टराईले भने, ‘सपना देख्नु राम्रो हो । यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सपना देखेको छ । ह्वाट भन्ने कुरा ल्याएको छ, तर हाउ भन्ने अब देखाउनुपर्छ ।’ उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त पनि गरे । ‘एउटै गोलीले धेरै चरा मार्छु भन्दा कुनै पनि चरा नमर्न सक्छ,’ उनले भने ।
विपक्षी दलका अन्य सांसदले एक वर्षीय योजना नल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे भने मधेसवादी दलका सांसदले संविधान संशोधनको विषय पनि समेट्नुपर्ने बताए ।
पुष्पा भुसाल, कांग्रेस सचेतक
हामीले एक दिनमा बोल्न ६५ मिनेट समय पाउँछौँ । त्यसभित्र शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूले १० मिनेटभन्दा बढी बोल्नुहुन्छ । उहाँहरू अझ धेरै बोल्नुहुन्छ र आफ्नो पालो ढिलो आउँछ भनेर हिँडेका हुन सक्छन् ।
शान्ता चौधरी, तत्कालीन एमाले सचेतक
लामो छलफलमा मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ । कोही चिया खान निस्किनुहुन्छ । जिल्लाबाट जनप्रतिनिधिको टोली डेलिगेसन आएको हुन्छ । उता पनि भेट्नैपर्छ । यो अपजसे पद हो । अरूको धारणा पनि सुनाैँ भनेका छौँ , नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।